Muusa Biixi oo gaadhay Magaalada Addis Ababa iyo Meeqaamka loo soo dhoweeyey!! (Arag Sawirro) – Xeernews24
Muusa Biixi oo gaadhay Magaalada Addis Ababa iyo Meeqaamka loo soo dhoweeyey!! (Arag Sawirro)
20. Februar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha maamulak Somaliland iyo weftigii uu hoggaaminayey, ayaa gaadhay caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa, waxana halkaas si diirran ugu soo dhaweeyey masuuliyiin ka tirsan dawladda federaal-ka Itoobiya .
Xubnaha soo dhoweeyey Muuse Biixi, ayaa waxaa hogaaminayey wasiirka wasaaradda Maaliyadda Itoobiya, Mudane Axmed Shide, waxaana ka mid ahaa wasiiru-dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda, Mrs. Hirut Zemene, agaasimaha arrimaha dawladdaha deriska u qaabilsan Itoobiya, Ato Yibeltal iyo xubno kale oo katirsan dawladda federaalka Itoobiya.
Madaxweynaha iyo weftiga uu hoggaaminayo, ayaa si heer sare ah loogu qaabilay madaarka Bole International Airport ee magaalada Addis Ababa, iyada oo ay gudo geli doonaan kulamadii ay la lahaayeen ra’iisal wasaaraha dawladda Federal-ka Itoobiya, Dr. Abiy Ahmed.
Waa markii ugu horreysay ee madaxweyne Biixi uu safar ku tago dalka Itoobiya tan iyo markii uu xilka qabtay Ra’iisul Wasaaraha dalkaas Abiy Axmed.
Muuse Biixi ayaa muddo dheer dadaal ugu jiray inuu la kulmo Abiy Ahmed, waxaana dadaallo dhowr ah oo horey u sameysay Somaliland ka cudur daartay Abiy Ahmed, waxaase muuqata in ugu dambeyn la aqbalay codsigii xukuumadda maamulka Hargeysa.
Bulshadda kunool degaanada maamulka Somaliland ay aaminsan yihiin in Madaxweyne Farmaajo uu ka mamnuucay Madaxda dowlad goboleedyadda in ay taggaan dalalka dariska la ah Soomaaliya.
Muuse Biixi ayaa dhowr jeer oo horey weerar ku qaaday madaxweyne Farmaajo isaga oo ku eedeeyey inuu cunaqabateyn iyo go’doon geliyey Somaliland.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/Bixii.jpg 968 1080 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-02-20 17:55:472019-02-20 17:55:47Muusa Biixi oo gaadhay Magaalada Addis Ababa iyo Meeqaamka loo soo dhoweeyey!! (Arag Sawirro)
Kornayl Hargeysa Muusa Bixii oo 6 bilood ka dib laga neefiyey Magaalada Addis... Farmaajo iyo Geele Oo Kulan Xasaasi Ah ku qaatay dalka Jabuuti.+Sawiro.